March 30, 2017 No Comments News, Somali 876 views
Amit Sadh waa jilaa soo caan baxay muddooyinkaan danbe wuxuuna Bollywood ka dhex sameystay Shacbiyad Fiican isagoo Filimaan dhowra kala soo muuqday Jilaayadda ugu awoodda badan Bollywood waxaana u danbeeyay Salman Khan oo uu Kala soo muuqday Filimkiisii Sultan Ee sanadkii hore soo baxay sidoo kale waxaa xusid Mudan in Amitabh Bachchan uu kala soo muuqan doono Sarkar 3 oo Duubistiisu socoto, hadanan waxaa la xaqiijiyay in uu Si rasmi ah uga mid noqday jilaayaasha Akshay Kumar kala soo muuqan doona filimka Gold. Filmkaan wuxuu ka hadlaya Taarikhda Ciyaaryahan Hindia halyey ka Noqday kaasoo usoo hoyiyay Biladdahoodii koowaad oo dahab ah taaso ay kaga soo guuleysteen Olympic-kadii sanadii 1948, 1952 iyo 1956 la qabtay Waxaana kasoo muuqanaya filimkaan Akshay oo hogaamiye ka hmateli doonanan doorkaa ciyaryahankaas Hockey-da ciyaari jiray halyeygana ka ah India ee Balbir Singh.
Dhanka mawduuc marka usoo Noqono, Amit Sadh wuxuu sheegay Mar wax laga warsadey Dareenkiisa la shaqeynta Akshay Inuu aad ugu faraxsanyahay la shaqeynta jilaagan isagoona ku daray inuu aad uga helo Sida Uu udadaalo markasta uuna ku daysaddo. Wuxuu intaa sii raaciyay Amit ‘waxaan haysanaa Labo bilood oon iskugu diyaarino filimkaan sida aan ugu ekaan laheyn ciyaartoy Leh Jirka Ciyaartoydii sanadkii 1948-kii. Ciyaarta Hockey-da ma sahlano, dad badan baa u qabo inay fududahay balse sidaas ma aho. Dhowrkii beri ee u horeysay ee aan tababarka qaadanay aad baa u daalnay murqaheenuna xanuun badan baa ka dareenay balse waxaaso dhan waxaa ka muhiimsan bad qabkeena taaso oo ku xiran hawsheena jiliineed ee filimkaan wayn’.
Amit Sadh Filimkaan wuxuu duubayaa Bisha june ee sanadkaan isago ka horna uu soo bixi doono filimka uu ku weheliyo superstar Amitabh Bachchan ee Sarkar 3 kaasoo soo bixi doona Bisha May 12-keeda.
Waynu wadda sugi doonaa filimkaan Taariikhda ka hadlaya iyadoo la moodo Akshay Kumar inuu muddooyinkaan danbe u batay Dhanka aflaamta Taarikhda ah iyo Kuwo fariimaha Wadaniyadeed xambaarsan taaso guulo wayn usoo hoyisay jilaagan.
Shahrukhan oo balan qaad aan inaba caadi ahayn sameeyey?–Muxuu yahay tolow
WARBIXIN+SAWIRO: Varun Dhawan, Alia Bhatt iyo Aditya Roy Kapoor oo booqday mataanahi dhawan udhasahy Karan Johar